China Tsika Yakarongedzwa Yakareba Sleeve Yevakadzi'S Hoodie PY-WW003 Kugadzira uye Fekitori | Pinyang
Solid color juzi varume nevakadzi vaviri juzi tsika yakadhindwa logo hoodie
Imhandoi jira rekusarudza yechando juzi kugadzirisa? Kuziva kweyakagadzirwa machira eHoodie
Muiyo Hoodie yakasarudzika, kune micheka yakasiyana-siyana yatinosarudza kubva mumusika, asi ndeupi rudzi rwejira reHoodi rinonyanya kudikitira uye kufema? T Kirabhu yekugadzirisa inozokutora iwe kuti unzwisise mamiriro ehembe dzeHoodie mumusika.
Yakasarudzika machira ejuzi - cashmere machira
Cashmere pachayo harisi izwi rakajairwa, asi zita rinowanzo shandiswa kumabhizinesi. Icho chikonzero nei ichinzi cashmere ndeyekuti ndeyekugadzira cashmere, saka inonzi cashmere, kwete bvudzi regwayana. Cashmere haina kudhura senge bvudzi regwayana, asi ine yakanaka yekupisa mhedzisiro, isingasviki pane yegwayana bvudzi. Naizvozvo, inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvokupfeka. Iko kusarudzwa kwevashandisi vazhinji kugadzirisa Hoodie. Izvo zvakare zvine fashoni kudziya.
Nguo tsika machira - yakachena machira machira
Donje rakachena rakagadzirwa nekotoni fiber. Cotton fiber ine yakanaka hygroscopicity, yakanakisa kutonhora basa, inogona kupinza ziya uye kugadzira ganda nyowani. Hembe dzakagadzirwa nekotoni yakachena dzakapfava uye dzakasununguka. Micheka yakachena yedonje inowanzo woma kusvika pakubata, kurema kuyerwa, uye kuve nemhepo iri nani. Vanonzwa kutonhorera pamuviri uye vakakodzera kugadzira mbatya dzezhizha. Nekudaro, machira akachena ekotoni ane imwe yemabhenefiti akakura, anoti, kufema ziya uye mweya kukwana. Izvo chete zvakashata ndezvekuti zviri nyore kuunyana.
Yakasarudzika machira ejuzi - polar dehwe
Polar dehwe imhando yakarukwa jira. Chinhu chidiki cheYubaobao chakarukwa, chakarukwa pamushini muhombe wedenderedzwa. Mushure mekuruka, jira jena rinovezwa pekutanga, rozogadziriswa neakasiyana maitiro ekupedzisa akadai sekurara, kuita makadhi, kuveura uye kupora. Rutivi rwemberi rwejira rwacho rwakakweshwa, uye zviyo zviri kuzungunuka zvine hunyoro uye zvakafuta, uye hazvisi nyore kudurura makushe nekuzadza, uye iro rekumashure ishoma uye kunyange, Pfupi villi, yakajeka dhizaini uye yakasununguka. Izvo zvinongedzo zvinowanzo kuve polyester, nyoro kunzwa.
Idzi mhando nhatu dziri pamusoro dzemicheka yeHoodie zviri nani ziya rinotora uye machira ekufema eakagadzirwa hoodi; kuti uwane rumwe ruzivo nezve machira kusarudzwa kweakashongedzwa hoodi uye shamwari dzeakashongedzwa hoodi, ndapota nyorera t Kirabhu maitiro online online vatengi.
Jira rakapfava rakagadzirwa ne50% polyester fiber uye 50% donje. Iyo kuunyana kuunyana uye kusapfeka-kusagadzikana. Iyo ine kusimba kwakanaka uye kujeka kugadzikana. Izvo hazvisi nyore kupura uye static magetsi. Yakasanganiswa machira, ndiyo jira rakanyanya kukora, compact. Inogona kupfekedzwa nevarume nevakadzi. Iwe unogona zvakare kugadzirisa iyo pateni, ruvara uye logo.
Kupa Mhando: OEM sevhisi Nzvimbo Yekutanga: Jiangxi, China
Zita reBrand: PINGYANGYU Model Nhamba: WDC-WW003
Rudzi rweMachira: Kotoni musanganiswa Feature: DZVINYANYA KUSVIRA, Anti-kurira, Anti-Shrink, Pasina cap
Zvinyorwa: 50% Polyester，50% donje Technics: Yakadhindwa
Dhizaini: Yakarongedzwa Mwaka: Autumn
Chimiro: Casual Clothing Kureba: Vamwe Rudzi Rwemhando: Solid Sleeve Chimiro: Vamwe
Collar: V-mutsipa Kurema: 350g
Sleeve Kureba (cm): Yakazara mazuva manomwe sampuro yekuraira inotungamira nguva: Tsigiro
Chigadzirwa zita: Tsika inodonha yakasununguka v-mutsipa sweatshirt Chigadzirwa Rudzi: vakadzi sweatshirt
Keywords: akakurisa sweatshirt vakadzi Gender: Musikana Mukadzi Vakadzi
Logo: Yakasarudzika Logo Kudhinda Rudzi: Causal Wear
Item: OEM Sevhisi Tsika Saizi: Tsika Saizi
Sevhisi: Tsika OEM ODM Tsananguro: Tsika Yakagadzirwa Dhizaini
A: Ehe, yedu Customaker Zvisikwa zvine makore anopfuura mashanu echiitiko achishanda pamwe neEuropean neAmerican misika yemafashoni mukugadzira, kusimudzira uye maitiro ekugadzira.
Mubvunzo: Nezve saizi uye ruvara.
A: Gamuchira kugadzirisa.
A: Kugadzirwa kudiki: Mazuva mashanu Kugadzirwa kweMisa: 7-15days kana kutsigira yako qty.
A: Zvakanakisa zvigadzirwa (yakasarudzika dhizaini, yekumberi yekudhinda muchina, yakasimba solid kudzora) Fekitori
yakananga kutengeswa (yakanaka uye inokwikwidza mutengo) Huru sevhisi (OEM, ODM, mushure-salesservices, kukurumidza kuendesa) Nyanzvi bhizinesi kubvunza.
Pashure: Tsika Ruvara Logo Rew Neck Vakadzi Sweatshirt PY-WH001
Zvadaro: Drawstring Thicken Yakareba Sleeve Yevakadzi'S Hoodie PY-WW004
Akasununguka Uye Anochinjika Splicing Mid-Kureba Vakadzi H ...
Kudhinda Kwakasununguka Mutsika Yevakadzi Vakadzi Hoodie PY-WW002